Fampirantiana hazavana sy rano & rivotra 2020 | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Fampirantiana fahazavana momba ny rano sy rivotra
Fampirantiana Jiro Rivotra sy Rivotra [Farany]
～ Takashi Nakajima (mpanakanto ankehitriny) × Ota Ward Senzokuike Park Boat House ～
Raha afaka mampifandray ny lanitra sy ny dobo ianao dia alao sary an-tsaina ny rivotra eo anelanelany, ary tiavo ny taratry ny hazavana, ny aloka ary ny hazavana ampitaina.
Takashi Nakajima (mpanakanto ankehitriny)
Ny fametrahana an'i Takashi Nakajima, mpanakanto amin'izao fotoana izao monina ao Ota Ward, dia natsangana tao amin'ny tranon'ny sambo ao amin'ny Park Senzokuike, izay fantatra ho toerana fialan-tsasatry ny mponina ao Ota Ward. Did.Ny asa izay mampifandray ny tafon'ny tranobe sambo sy ny velaran'ny rano ao anaty dobo miaraka amin'ny sarimihetsika mangarahara dia mampifandray ny lanitra sy ny dobo, ary lasa fitaovana iray izay tsy manaiky fotsiny ny catabolism an'ny tontolo fa koa mamantatra indray ireo trano, olona, dobo, trangan-javatra voajanahary, sns. Nahafinaritra anay ny toerana vaovao niseho tamin'ny valan-javaboary.
Toerana: Tranon-tsambo Ota Ward Senzokuike Park
Fotoana: 2 septambra (Sat) -Oktôbra 9 (Masoandro), taona faha-9 nanjakan'i Reiwa
* Nokasaina ny 10 oktobra ny fivoriana, saingy nanitatra herinandro iray noho ny lazany.
Novokarin'i: Takashi Nakajima (mpanakanto ankehitriny)
Teraka tamin'ny 1972.Mipetraka any Ota Ward. Nahazo diplaoma tamin'ny Kuwasawa Design School, Sekolin'ny diplaoma an-tsary nahazo diplaoma tamin'ny 1994. 2001 Miaina any Berlin, Alemana. Nomena ny Fondation for the Promotion of Culture in the Memory of the Mizuken in 2014 and 2016. 2014 ART OSAKA 2014, valisoa JEUNE CREATION Loka lehibe (Osaka). Tamin'ny taona 2017, nasehony ny sangan'asa tamina fetibe sy galeriana isan-karazany, anisan'izany ny fampirantiana tao amin'ny Art Museum & Library, Ota City (Gunma Prefecture), "Ny fiandohan'ny tantara dia ny fiandohan'ny tantaran'ny sary sy ny teny."
Fikambanan'i Washoku Scenic Association
Valan-javaboary Ota Ward Senzokuike
Tetikasa mifandraika atrikasa ho an'ny ankizy "Hikari's walk" [Farany]
Nanao dia an-tongotra alina tao amin'ny Park Senzokuike izahay niaraka tamin'ny mpanoratra Takashi Nakajima sy Ichikawadaira, mpanoratra jiro manokana.Nalefanay ny sary tianay indrindra nalain'ny ankizy rehefa nandeha nitety ny valan-javaboary tamin'ny tranokalanay izahay.
Daty sy ora: 2 septambra (Sat) ary 9 (Sun) an'ny Reiwa 26 manomboka amin'ny 27:18 ka hatramin'ny 30:19
Mpampianatra: Takashi Nakajima (mpanakanto ankehitriny), vahiny, Taira Ichikawa (mpanakanto manazava manokana)
Mpandray anjara: Mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany sy ny ray aman-dreniny
Fitifirana (No. 1-26): Mpandray anjara
Horonantsary 2020 drafitra reakta Kamata